Farihy Tamblingan any Bali. Indonezia " Journey-Assist - Sarintany Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Farihy Tamblingan
Farihy Tamblingan (Danau Tamblingan) any Bali
Farihy Tamblingan. Fijery zanabolana
Topimaso momba ny farihy Tamblingan
Ity farihy ity dia miorina amin'ny kaldera amin'ny volokano any Bali. Ny haavon'ny farihy ambonin'ny haabon'ny ranomasina dia 1 200 m Ity no kely indrindra amin'ireo farihy lehibe 3 any avaratry Bali. Ankoatr'izay, Tamblingan dia iray amin'ireo farihy madio indrindra eto amin'ny nosy.
Ny toerana misy an'io farihy eo amin'ny nosy io dia ny tehezan'i Lesung Mountain any amin'ny faritra avaratry Bali. Ny kaldera misy ny fitoeran-drano dia namboarina avy tamin'ny vava volkano maromaro. Tsy lavitra an'i Tamblingan dia misy farihy hafa antsoina hoe Buyan. Hatramin'ny taonjato faha-19 dia rano iray i Buyan sy Tamblingan. Na izany aza, nisy horohoron-tany mafy, izay nanjary fisehoan'ilay fefiloha nampisaraka azy ireo.
Toetra mampiavaka ny farihy
Ny Farihin Tamblingan dia 2 km ny halavany, 1,1 km ny sakany, ary 1,6 toradroa. km, halaliny - hatramin'ny 90 m. Voararan'ny lalàna ny filomanosana amin'ny sambo maotera. Ny lakana kely ihany, izay amin'ny fiteny eo an-toerana antsoina hoe "perahu", no mandeha ambony rano. Mponina amin'ny tanàna akaiky indrindra no manjono ao amin'ity farihy ity.
Ny fahitana mahavariana an'ity reservoir ity dia azo jerena ao amin'ny tokotanin-tseranana, voalamina eo amin'ny havoana iray ao amin'ny tanànan'i Asah Gobleg. Saingy eny an-dàlana mankany Tumbligan dia misy tranokala maro hafa. Kafe kely ny ankamaroan'izy ireo.
Ity farihy ity dia voahodidin'ny ala tropikaly miaraka amina casuarins, sedera, kesika, orkide. Ny rajako koa be dia be eto.
Ny farihin'i Tamblingan dia tsy dia tian'ny mpizaha-tany noho ny farihy mifanakaiky aminy. Tsy noho izy tsy mahaliana eto, fa satria io rano be io dia lavitra ny faritra be mponina. Ho an'ireo tia ny zorony mangina sy ny natiora virijina dia mety tsara ny miala sasatra eo akaikin'i Tamblingan.
Any amin'ny haavo 1200 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina any avaratr'i Bali no misy ilay farihy, eo amin'ny kalon'ny volkano maromaro. Manakaiky ny Farihy Buyan.
mandrindra: -8.257038, 115.096514
Lake Tamblingan amin'ny sari-tanin'i Bali
Ny farihy Tamblingan sy ny farihin'i Buyan avy amin'ny tokotanin-tsambo manelanelana azy ireo
Tempoly any atsimon'ny Farihy Tamblingan. Afaka jerenao amin'ny sari-taninay Bali amin'ny fomba sarintany zanabolana (esri)
Filentehan'ny masoandro tao amin'ny Farihy Tamblingan